रोचक/विचित्र Archives - Pahilo Online
बिहीबार, २ माघ २०७६, २१:३१
कास्की । पोखराको मणिपाल हस्पिटलमा २६ वर्षीया महिलाले एकै पटकमा चार सन्तानलाई जन्म दिएकी छन् । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ कि सुनिता पौडल प्रधानले बिहीबार बिहान ९ बजे शल्यक्रियामार्फत चार सन्तानलाई
सोमबार, २१ पुष २०७६, १६:१७
मोरङ । पत्रिका, किताब तथा कापीको पानामा सडक छेउमा पाउने विभिन्न खानेकुराहरूका साथ साथै घरमा समेत राखेर खाने गरिन्छ । हामीले राख्ने भाडा नभेटेको खण्डमा पत्रिकामा वा कागजको टुक्रामा खानेकुरासमेत
सोमबार, ३० भाद्र २०७६, २१:५७
पथरी–एकैपटकमा ३ सन्तानको जन्म बिरलै हुने गरेको छ । तर मोरङको पथरीमा एक महिलाले पहिलो पटकमै ३ सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन । मोरङको पथरीशनिश्चरे १ मा भगवती खडकाले ४ दिनअघि
अक्षर चिन्दा वा पढ्दा पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदायका युवा लेखपढ गर्न थाले
शनिबार, ७ भाद्र २०७६, १४:४६
दैलेख– राउटे समुदायमा अक्षर चिन्दा वा पढ्दा पाप लाग्छ भन्ने मान्यता राख्ने समुदायका युवा लेखपढ गर्न थालेका छन्। यहि मान्यताले गर्दा उनीहरू कसैले पढेका थिएनन्। पछिल्लो पुस्ताले लेखपढको रहर
आईतवार, ४ चैत्र २०७४, १०:४९
कुनैपनि कामदारले कार्यक्षेत्रमा जति धेरै काम गर्यो उति नै धेरै मालिकको प्यारो हुनुपर्ने हो । तर एकजना कामदार भने आवश्यकता भन्दा बढी काम गर्दा दण्डित भएका छन् । घटना फ्रान्सको
अनौठा र रोचक यौन नियम
बुधबार, १६ फाल्गुन २०७४, ११:२५
यौन वा यौन जीवन यस्तो विषय हो, जसका बारेमा खुलेर कुरा गर्न जो कोहि पनि हिच्चिाउँछ । अझ पूर्वीय सभ्यताका देश र समाजमा यौनका विषयमा खुल्ला बहस बर्जित नै छ
चिया पसलेको खातामा सात करोड
शनिबार, १२ फाल्गुन २०७४, १२:५४
चिया पसलेको खातामा समान्यतः कति पैसा होला ? तर, जयपुरको एक चिया पसलेको खातामा सात करोड ६८ लाख जम्मा देखिएको छ । खातामा यति धेरै पैसा देखिएपछि कर विभागले हैरान
आफ्नै बुवालाई स्तनपान !
शनिबार, १२ फाल्गुन २०७४, १२:५२
एउटा पेन्टिङ संसारभरी भाइरल भयो । जसले युरोप लगायत संसारभरी आध्यात्म, पवित्रता, मानवीय मूल्य,मान्यता र प्रेमका बीच वहस ल्याएको छ । यो पेन्टिङ यूरोपका प्रसिद्ध कलाकार बारतोलोमिओ एस्तेवन मुरिलोले बनाएका
सर्पको डरले ढोकाविहिन घर
शनिबार, १२ फाल्गुन २०७४, १२:५०
सर्पबाट जोगिन बलियोसँग झ्यालढोका लगाउँछन् मानिसहरु । तर भारतको उत्तरप्रदेशको एउटा गाउँमा भने सर्पकै कारण ढोका नै लगाउन नपाउने चलन छ । प्रतापगढको सुडेमऊ गाउँमा कैयन् दशकदेखि यही प्रथा कायम
चोरबाट बच्न यस्तो हर्कत
मंगलवार, ८ फाल्गुन २०७४, १०:३७
के सुरक्षा जाँचको क्रममा तपाई कहिले आफ्नो सामानको हिफाजतलाई लिएर चिन्तित हुनुभएको छ ? चीनकी एक महिला रेल–स्टेशनमा जाँचको क्रममा आफ्नो व्यागलाई लिएर यो हदसम्म चिन्तित भइन् कि उनी ब्यागसँगै